၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ အတိုအထွာ (TheGeek) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ် ဖက်ရှင်
မုရန် - ဆူရက်ဇ် ကိုယ်အပြစ်ကိုသိပြီး ၆ ရက်အကြာ၊ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း
ဇာနည်ဝင်း - အပြန်အလှန်မေ့ပစ်တတ်ကြတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်နဲ့ အမတ်များ
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) - မြေယာပြဿနာတွေပြည့်နေ တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့စပါးကျီ
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ထာဝစဉ်ဝေးနေမှာလား (Tu Maung Nyo)
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ အတိုအထွာ (TheGeek)
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ အတိုအထွာ
နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးနှစ်တကြိမ် ရွေးကောက်တဲ့ သမ္မတနဲ့ ဒု-သမ္မတ အတွက် ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့ ပါတီအလိုက် မဲပေးကြမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်ပြည်နယ်ကနေ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေ ရွေးကြမယ်။ ပြည်နယ် (မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် တုိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ) လွှတ်တော်တွေအတွက်လည်း အမတ်တွေရွေးချယ်ကြမယ်။ ဒ့ါအပြင် ကိုယ်နေထိုင်ရာ မြို့နယ်၊ မြို့တော်နဲ့ စည်ပင်သာယာအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါ မဲပေးပြီး ရွေးချယ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် ကယ်လီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်က ကိုယ်စားပြုဒီမုိုကရေစီစနစ်အပြင် တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပါ ကျင့်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူဆန္ဒ တိုက်ရိုက်ကောက်ယူပြီး ပြည်နယ်နဲ့ မြို့နယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများကိုပါ အတည်ပြုခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီဆိုတာက လွှတ်တော်ထဲက ကိုယ်စားလှယ်တွေကတဆင့် ဥပဒေတွေ အဆိုပြုချက်တွေ တင်သွင်းတာဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့ ပြည်သူတွေဆီက တိုက်ရိုက်သဘောထားတွေတောင်းခံပြီး ဥပဒေအဖြစ် အဆိုပြုချက်တွေကို အတည်ပြုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ ပညာရေးဘတ်ဂျက်တွေကို ကန့်သတ်ဖို့ ပြည်နယ်အမတ်တွေ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေက သူတို့ဖာသာ လွှတ်တော်ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်တာဟာ ကိုယ်စားပြုဒီမုိုကရေစီကနေ ဆုးံဖြတ်တဲ့ ဥပဒေပြုစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့၊ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ ၂ သိန်းခွဲ ကျော်ဝင်သူတွေကို အခွန်တိုးကောက်ပြီး ပညာရေးဘတ်ဂျက်ထဲမှာ ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် ပြည်သူတွေက တိုက်ရိုက်သဘောထားကောက်ယူပြီး ဥပဒေအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်ပေးဖို့ မဲပေးတောင်းဆိုခြင်းကတော့ တိုက်ရိုက်ဒီမုိုကရေစီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ကိုယ်စားပြုဒီမုိုကရေစီနဲ့ ဥပဒေပြုခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ခြင်း လုပ်နေချိန်မှာပဲ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူထုလက်မှတ်တွေ စုဆောင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဥပဒေတွေ အသစ်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းတွေအတွက် မဲဆန္ဒခံယူခြင်းတွေပါ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီကိုယ်စားပြု လက်ရှိ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ဒုသမ္မတ ဘိုင်ဒင်တို့နဲ့အတူ အတိုက်အခံ ရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီကိုယ်စားပြု အပြိုင်သမ္မတလောင်း မစ်ရော်နီတို့ကို ပြည်သူတွေက မဲပေးပြီး ရွေးချယ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်ရွေးချယ်တဲ့စနစ်မှာ ပြည်သူတွေဆီက တိုက်ရိုက်မဲစနစ် မဟုတ်ဘဲ electoral college စနစ်နဲ့ ရွေးမယ်လို့ သူတို့အခြေခံဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြည်နယ်အများစုကတော့ လူထုပေးတဲ့ မဲအများဆုံးရသူကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးပေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့စနစ်နဲ့ သိပ်ပြီး ကွာခြားခြင်း မရှိဘူး ဆိုရပါမယ်။
လက်ရှိမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီက သမ္မတအိုဘားမားက ပြည်နယ်အလိုက်မဲကိုယ်စားလှယ် (electoral college) ၂၃၀ ၊ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီက သမ္မတလောင်း မစ်ရော်နီကတော့ ၁၉၁ မဲကိုယ်စားလှယ် ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ တကယ့် နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်နယ်အလိုက်မဲကိုယ်စားလှယ် ၂၇၀ အနည်းဆုံး ရတဲ့သူက အနုိုင်ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲသည်မဲကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာက ပြည်နယ်အလိုက် လူဦးရေအခြေပြု လွှတ်တော်အမတ်အရေအတွက်နဲ့ ပမာဏကို သတ်မှတ်တာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အစုိုးရတွေက (တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ ပါတီကြီးတွေကိုယ်တိုင်က) သီးသန့် မဲကိုယ်စားလှယ်တွေ (elector) ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သဘောကတော့ ဒီမိုကရက်အားကောင်းတဲ့ ပြည်နယ်က ဒီမုိုကရက်ဖက်အားသာတဲ့ မဲကို်ယ်စားလှယ်တွေ အသာရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ခန့်မှန်းတဲ့ဆီမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားက မဲ ၅၀ ဟာ ဒီမုိုကရက်အတွက် အမြဲခန့်မှန်းထားနိုင်ပြီး တက္ကဆပ်ပြည်နယ်က မဲ ၃၈ နေရာဟာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်သမ္မတအတွက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (အမေရိကန်ပြည်မှာ ပြည်နယ် ၅၀ဆီက electors ၅၃၈ ဦးကို ပြည်နယ်အလိုက် လူဦးရေအချိုးအစားလိုက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်)
သည်နှစ် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတတွေ၊ အမတ်တွေ၊ စည်ပင်သာယာလူကြီးတွေ ရွေးချယ်တာအပြင် Proposition လို့ခေါ်တဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကိုပါ တိုက်ရိုက် မဲဆန္ဒခံယူမှာ ဖြစ်လို့ အဆိုပြုချက်ပေါင်း ၁၁ ခုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲသည် ပြည်နယ်အတွက် အဆုိုပြုချက်တွေက ပြည်ထောင်စုအဆင့် (federal) ဥပဒေပြဌာန်းချက်မဟုတ်သော်လည်း ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ အသက်ဝင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ဆေးခြောက်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် အရေးယူသော်လည်း ပြည်နယ်အဆင့်မှာ ဆေးခြောက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနှစ်အတွက် အဆိုပြုချက် ၁၁ ခုမှာ ပြည်နယ်အတွက် အခွန်စနစ် ပြောင်းလဲတာတွေ၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူတာတွေ၊ အရင်ပြဌာန်းပြီးသား ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်တာတွေပါ ပါဝင်တာမို့ ပြည်နယ်အဆင့် မဲပေးကြမယ့် မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ ကုိုယ့်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်အတွက် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အရေးပါသူတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အတွေးကို ဆက်တွေးမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပြီး မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်မှုတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ ပြည်နယ်ဥပဒေအဖြစ် ပြဌာန်းချက်အဖြစ်နဲ့ တိုက်ရိုက် တရားဝင်တောင်းဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ပံတောင်းတောင် ပရိုဂျက်ကို ရပ်ဆိုင်းဖို့၊ ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်းတွေကို ကန့်သတ်ဖို့ကို ဒေသဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေအလိုက် ပြည်နယ်အဆင့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေ ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခုိုင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ သဘောထားကို လွတ်လပ်စွာ ပြဌာန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု (ဖယ်ဒရယ်) လွှတ်တော်နဲ့ အစုိုးရကတော့ တပြည်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာဥပဒေတွေ အဆိုပြုချက်တွေ ပြင်ဆင်တာတွေ၊ တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ကြရုံပေါ့လေ။
မည်သုို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဆန္ဒမဲ ကောက်ယူပြီး အဆုံးအဖြတ်ခံယူတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာ၊ ပြည်သူ့ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးလိုသူတွေ၊ ပုံသွင်းလိုသူ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ပါတီတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ၊ အာဏာရှင်တွေ၊ ဓနရှင်တွေ၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးတွေကတော့ ပြည်သူတွေကို ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ အထူးတလည် ပစ်မှတ်ထားပြီး စည်းရုံးလှုံဆော်တာတွေ လုပ်ကိုင်နေကြတာကတော့ တပြည်လုံး တရုန်းရုန်းနဲ့ ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်တို့ အစုိုးရနဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီတသိုက်လည်း ၂၀၁၅ အတွက် မြန်မာတပြည်လုံးမှာ တရုန်းရုန်းနဲ့ပဲလားလို့ မေးကြည့်မိချင်သေးတော့ဗျာ။ ။
Tags: ကချင်, ရခုိုင်, ပြည်တွင်းစစ်
လက်ပံတောင်းသပိတ်အလွန် (ဦး)သိန်းစိန်ပြောတဲ့ မြန်မာနွေဦးကာလများ (Maung Yit) (2)
One Response to ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ အတိုအထွာ (TheGeek)
need domo GOV on October 16, 2012 at 7:56 pm
Hello’ every one …i can tell they will stupid on election 2015 like 2010 because they worry will happen like DKBA in 2010. They try to makeastrong guard in border not to come fight war in they are stupid election on 2015. Than shwe and his grandson Pho hla pyae stay contro on ARMY. Than shwe grandson will plan on 2015 election for stupid(stolen vote).